घट्याे अचम्मकाे घटना ! सात दशक सँगै विताएका दम्पतीले सँगै संसार छाेडे – All top Here
Home/समाचार/घट्याे अचम्मकाे घटना ! सात दशक सँगै विताएका दम्पतीले सँगै संसार छाेडे
घट्याे अचम्मकाे घटना ! सात दशक सँगै विताएका दम्पतीले सँगै संसार छाेडे
adminSeptember 1, 2019
इलाम : विहे गरेकाे सात दशकपछि एक दम्पतिले एकैसाथ संसार छाेडेका छन् । इलामको माई नगरपालिका–३ का ९५ वर्षीय डिल्लीबहादुर थापा र ९३ वर्षीया तोरनकुमारी थापाकाे जोडीले एकैदिन मृ’त्युवरण गरेका हुन्। यसरी ७ दशक सँगै विताएका जाेडीकाे सँगै जिउने सँगै मर्ने चाहना पुरा भएकाे भन्दै स्थानीय अचम्मित भएका छन् ।
थापा जोडीको मृ’त्यु ६ घण्टाको फरकमा भएको हो उनका आफन्तले जानकारी दिएका छन् । शुक्रबार साँझ ६ बजे डिल्लीबहादुरको नि’धन भएको थियाे । त्यसकाे ६ घण्टा वित्न नपाउदै तोरनकुमारी पनि संसार छा’डेकी थिइन । लामो समयदेखी तोरनकुमारी वि’रामी भएपनि डिल्लीबहादुर भने स्वास्थ्य नै थिए। तर एक्कासी याे जाेडीकाे एकैदिन नि’धन भएकाे हाे ।
स्थानीयका अनुसार सामान्य भाइरल ज्वरोले थलिएका श्रीमान एक्कासी मुटु दुखेकाे केही घण्टा नवित्दै नि’धन भयो । श्रीमानकाे नि’धन भएकाे ६ घण्टा नवित्दै त्यही पींडा स’हन नसकी श्रीमतीकाे पनि नि’धन भएकाे हाे । श्रीमानश्रीमती दुवैजनालाई लोदिया दोभानमा एउटै चि’तामा ज’लाइएकाे छ । यस्ता घटना विरलै हुने गरेकाे स्थानीय बताउँछन् । ७ दशक सँगै विताएका थापा दम्पतीको १ छोरा, ४ छोरी, ३ नातीनी, २ नाती र १ पनाती रहेका छन्।
काठमाडौं मा घट्यो।डरलाग्दो घटना… प्रहरी नै चकीत
काठमाडौंमा भएको बम विष्फोटने पाल बन्द विप्लवले निकाले यस्तो विज्ञप्ति
दुई मोटरसाइकल ठोक्किँदा दुईको मृत्यु चार घाइते
अर्घाखाँची बस दुर्घटनाको त्यो कहालीलाग्दो त्रासदी, जस्ले पाए नयाँ जीवन
बस दुर्घटना : तिहार मनाउन हिंडेका युवाहरू जीवनसाथी ‘एक्लै पारेर’ सधैंलाई अस्ताए